बच्चा जन्माउन नसकेको भन्दै श्रीमानको ह, त्या ! – Ujyaalo Patrika
बच्चा जन्माउन नसकेको भन्दै श्रीमानको ह, त्या !
काठमाडौं : हालै एउटा अनौठो ह’ त्या भएको छ। जहाँ एक महिलाले आफ्नै पतिको च, क्कु प्र,हा,र गरी निर्मम तरिकाले ह’ त्या गरेकी छन्।
भारतको राजधानी दिल्लीमा ३६ वर्षीया रेणुका शर्माले बच्चा जन्माउन नसकेको भन्दै आफ्ना ३७ वर्षीय पति चिराग शर्माको ह’ त्या गरेकी छन्।
प्रहरीका अनुसार उनीहरु दुवै जना एकै कम्पनीमा काम गर्ने गर्दथे। लामो समयदेखि बच्चा नजम्मेपछि पति पत्नीबीच वि,वाद हुँदै आएको थियो।
घ,ट,नापछि ह’ त्या आ,रो,पमा रेणुकावि रु द्ध प्रहरीले मु,द्दा दर्ता गरेको छ।
साउदी अरेबियाले कतारमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको छ ।
सन् २०१७ जुनदेखि साउदी अरेबियासहित, यूएई, बहराइन र इजिप्टले कतारसँगको कूटनीतिक, व्यापार र यातायात सम्पर्कबिच्छेद गरेका थिए । कतारले इरानसँग सम्बन्ध राखेर आ,तं,कवा,दलाई बढवा दिएको आरोप थियो । कतारले भने यो आ,रो,पको खण्डन गर्दै आएको छ ।